EZONA 8 ZIBALASELEYO ZEESANDI EZINGAPHANTSI KWAMA- $ 200 - IZIXHOBO
Iimoto Kunye Neerides
Uyilo lweTattoo yekhamera yama-80 yaMadoda-Iifoto zeInkathi zokuFota
Iingcamango ezi-70 eziphezulu zeSihlalo soLoliwe
Isikhokelo Sokuthenga Isipho SikaTata sokuGqibela ngo-2021
Ezona 8 zibalaseleyo zeeSandi ezingaphantsi kwama- $ 200
Ukuba ufuna ukuphucula kakhulu umgangatho wezandi weTV yakho, ibar yesandi yindlela eya kuyo. Zinezithethi ezininzi ngaphakathi kuzo ezikunceda ukuba ube namava esandi esingqongileyo, ngaphandle kofakelo olunzima.
Ingxaki kubantu abaninzi kukuba iibhar yesandi zinokubiza kakhulu. Kulapho sasifuna ukunceda khona. Sikhangele phezulu naphantsi ukuze size neebarbars ezilungileyo ezingaphantsi kwe- $ 200 ukuze ube namava amnandi ngaphandle kokophula i-bhanki.
Yintoni eyenza ibar yesandi ebalaseleyo? Umgangatho wesandi ubaluleke kakhulu, emva koko ezinye izinto ezibalulekileyo zibandakanya ukuphuma kwamandla, unxibelelwano kunye nokusebenziseka. Uninzi lwee-soundbars ezilungileyo kakhulu ziza ne-subwoofer yezo bass zinamandla.
Sithathele ingqalelo konke oku xa sisenza uluhlu lwethu. Konke okufuneka ukwenze kukufunda kwaye ukhethe eyona ilungileyo kuwe. Masiqalise!
indlela yokuhlobisa i-niche eludongeni
1. LG 2.0 Isiteshi 140 Ibar yesandi
Olu lolona khetho lwethu lubalaseleyo njengoko ludibanisa isandi esimangalisayo kunye nazo zonke izinto ozifunayo. Ukongeza kuloo nto, nathi sicinga ukuba lixabiso elikhulu lemali.
Ngamafutshane, le bar yesandi iguqula igumbi lokuhlala kwigumbi lokudlala ekhaya. Ingxolayo kodwa ingangxoli ngokuvakalayo enika amava okumamela alungeleleneyo. Iza kwiindawo ezintathu, kunye neyunithi yokufumana i-wireless kunye nezithethi ezimbini eziyi-70W nganye.
Izithethi ziqhagamshelwe kusetyenziswa izihlanganisi zokutyhala kumamkeli ongenazingcingo kunye neendlela ezisekhohlo nasekunene. Ibha yesandi ephambili inokudityaniswa ngaphandle kwamacingo kwisithethi sesithethi. Useto lwesandi lunokulawulwa kwaye luhlengahlengiswe kusetyenziswa usetyenziso lwe-LG Wi-fi efakwe kwi-smartphone.
Ubungakanani obuncinci besithethi kunye nobunzima buyakhohlisa kwaye kuphantse kungakholeleki ukucinga into encinci kangaka inokupakisha inqindi elinomtsalane.I-LG ikwenzile ezi zithethi ukuba zibekwe eludongeni kodwa ayisayi kujongeka ngathi iphazamisekile, nokuba ibekwe kwiyunithi yeTV okanye kwiindawo ezinikezelweyo. Yindlela elula yokufumana isandi esikhulu.
2. I-JBL Bar 2.1 Ibar yesandi enikwe amandla
I-JBL 2.1 Powered Soundbar ipakisha i-300W yamandla kwaye iza ne-wireless 6.5 subwoofers. Isithethi esiphambili sinesimbo esityebileyo esidibeneyo kwaye sifakelwe ibha ye-28 egqoke i-JBL's gunmetal grey.
Ulawulo lubekwe ngaphezulu kwebar yesandi kwaye ibandakanya amaqhosha evolumu, amandla kunye nomthombo. I-JBL 2.1 Powered Soundbar bar-covered front ibandakanya iscreen se-LED ngokulula emehlweni.
I-tattoo yamabhabhathane amnyama naluhlaza okwesibhakabhaka
Le indibaniselwano yezithethi kunye ne-subwoofers yenza isandi esilinganiselweyo kunye neebass ezinzulu kakhulu. Yenza ukuba ilungele iithiyetha zasekhaya, umculo, kunye nemidlalo yevidiyo. Ibar yesandi ine-HDMI, iAux, kunye negalelo le-USB eyenza ukuba idibane nemithombo eyahlukeneyo yesandi kunye nezixhobo. Olunye uphawu kukudityaniswa kweBluetooth 4.2 evumela ngokufanelekileyo abasebenzisi ukuba banxibelelane nezixhobo kunye nebar yesandi ngaphandle kwentambo.
Ibar yesandi iza nekhono le-JBL Soundshift elenza ukutshintsha ngokulula nangokungabinamthungo komthombo wesandi ukusuka kwiTV ukuya kwifowuni yakho ephathekayo kwithebhulethi yakho. Olunye lwezakhono ezizodwa zale bar yesandi kukuba isenokusebenza noninzi lwee-TV ezikhoyo namhlanje.
Ubunzima bebonke beli seti bungaphantsi kwe-16 lbs. kwaye ibonakala ilula kwaye intle. I-JBL 2.1 Ibar yesandi enikwe amandla ngokuqinisekileyo yeyona nto ikhethiweyo.
3. Ubuchule beSandi esiShukumayo soMoya esiShukumayo
I-Sound Stage Air Portable Soundbar ithathwa njengebhari yesandi enexabiso elifanelekileyo ngokusekwe kwisandi esigqwesileyo, ubungakanani be-compact, kunye nobomi bebhetri obude kodwa ngaphandle kokophula ibhanki.Umthombo wesandi unokudityaniswa nale bar yesandi ngeBluetooth okanye nge-3.5 mm yegalelo. Ikwanokuhambelana ukunxibelelana nabadlali beMP3 okanye iingoma ezigcinwe kwisixhobo sokugcina nge-USB ngezibuko layo le-USB.
Ibar yesandi ine-20W yamandla okuphuma kwamandla ngelixa isakwazi ukusebenza ukuya kuthi ga kwiiyure ezintandathu zokudlala ngokulalelwayo kwiibhetri zodwa. Xa iibhetri ziphelile, i-Creative Stage Air Portable Soundbar inokuxhonywa ize ihlawuliswe kusetyenziswa izibuko le-USB.
Ngokweaudiyo, le bar yesandi inokukhupha amandla, i-punchy, kunye ne-bass enzulu kusetyenziswa amandla ayo eBass Bass. Ukulula kwaye kulula ukufikelela kulwakhiwo lwamaqhosha on / off, amaqhosha evolumu, kunye neBluetooth on / off, ibekwe kwicala lesandi.Ukulinganisa nje ngaphantsi kwe-2 lbs, le bar yesandi inokufakwa ngokulula phakathi kokubeka esweni ikhompyuter kunye nebhodi yezitshixo ngaphandle kokubona.
Ibar yesandi ye-Samsung HW-A450 inesandi esinzulu nesityebileyo kwaye ibar yesandi ine-subwoofer yayo engenazingcingo. Ukuqhagamshela kumthombo weaudiyo, umzekelo, iTV, inokwenziwa ngeBluetooth.
Kuyenzeka ukuba unike le bar yesandi ukonyusa kwangoko ngokucofa iqhosha. Ngomsebenzi obizwa ngokuba yiAdaptive Sound Lite, ukulandelelwa komsindo kuyaphuculwa ngexesha lokwenyani netekhnoloji elingana nomculo wangasemva ukwenza ulawulo lwevolumu olungaguquguqukiyo.
Nge-Samsung TV, le bar yesandi inokudityaniswa nesilawuli kude seTV, okuthetha ukuba kude okude okujongwa phakathi kwesofa. Ngobunzima be-12.80 lbs, le bar yesandi inokudityaniswa nezithethi ezingemva ngeSamsung ukwenza inkqubo yesandi ejikeleze ngaphandle kwamacingo.
Ngokulahla ngokupheleleyo isidingo sokudibanisa iingcingo phakathi komthombo weaudiyo, i-subwoofer, kunye nezithethi ezingasemva, kulula kakhulu ukubeka ibar yesandi phantse naphi na egumbini. Ngaphandle kweengcingo, uyilo nalo lucekeceke kakhulu, lucocekile kwaye alunamthungo.
Bona ngakumbi malunga - I-TV ezi-8 ezilungileyo kakhulu ezingaphantsi kwama- $ 300
5. I-Vizio V Series 2.1 Inkqubo yebar yesandi
I-Vizio V Series 2.1 Isiteshi seSandi yebar yesandi iyakwazi ukukhupha eyona ntsebenzo yomsindo evela kumxholo we-4K HDR kunye neDolby Audio xa uqhagamshele kwi-HDMI.Ngobuchule bokukhupha i-96dB yenqanaba loxinzelelo lwesandi kunye nobubanzi be-50Hz ukuya kwi-20kHz, le bar yesandi ihambisa isandi esiguqukayo nesichanekileyo. Inqaku elibizwa ngokuba yi-DTS Virtual-X inokuphucula iaudiyo yawo nawuphi na umxholo onomgangatho ukuya kwisilingi kwisandi esibonakalayo se-3D.
Iibhasi ezinamandla kule bar yesandi ziveliswa yi-5 subwoofer engenazingcingo. Ukungabinazingcingo kunezixhobo zayo, kwaye enye yazo iyakwazi ukubeka i-subwoofer engenazingcingo naphi na egumbini ukongeza ii-bass ezinzulu ezinamandla.
I tattoos band band kumadoda
Inxalenye eyodwa yoluhlu lweVizio V Series 2.1 yeKhonkco yebar yesandi yiLizwi lokuNcedisa iLizwi. Abasebenzisi bangasebenzisa ilizwi labo ukulawula i-Alexa, iSiri, okanye izixhobo zikaMncedisi kaGoogle kwibar yesandi eno-3.5 ozinikeleyo okanye uqhagamshelo lweBluetooth.Le bar yesandi yenzelwe ngokumangalisayo kwaye inembonakalo entle engayi kuyenza ibonakale ngaphandle kwendawo kulo naliphi na igumbi.
6. Ibar yesandi yeRoku Streambar Stereo
Ibha yesandi yeRoku Streambar Stereo ixhotywe ngomsasazo owakhelweyo kwi4K ovumela ujongano olukhawulezayo nezona ziteshi zintsha nezaziwayo, kunye nokufikelela kukonwaba simahla okungapheliyo.Ngokuqinisekileyo yindawo enkulu yokudibanisa le bar yesandi ukuze ikwazi ukusasaza kwi-HD eqaqambileyo, i-4K, kunye nemifanekiso ye-HDR ngesisombululo esibukhali kunye nemibala eqaqambileyo elungiselelwe nayiphi na i-TV. Kwakhona, ayisiyonto ingako ukusho ukuba izithethi ezine zangaphakathi zinokugcwalisa ngokulula igumbi elikhulu elineDolby Audio.
Ukusekwa kwebar yesandi kulungisiwe kwaye oku kwenza ukuba ibar yesandi ivelise isandi esipheleleyo nesityebileyo esingaphaya kobukhulu bayo. Konke oku kwenzelwa umbulelo kubunjineli bomsindo obuphambili ngaphakathi kwe-Roku OS. Ukunyusa ivolumu kunye nokucaca kwentetho kuya kwenza ukuba i-TV yakho ive lula kwaye yongeze ubunzulu kumculo wakho.
Yonke into efunekayo ukuseta ibar yesandi ifakiwe ebhokisini. Konke okufuneka ukwenze kukuyixhuma kwiTV kwaye uyixhume kwi-intanethi. Ibar yesandi ikwanendawo yokuhambisa iBluetooth.
izimvo zomqolomba omncinci omncinci
7. Yamaha YAS-109
I-Yamaha YAS-109 ixhotywe nge-HDMI, iBluetooth, kunye nonxibelelwano lweWi-Fi. Ngokungafaniyo nezinye ii-soundbars ezikolu luhlu, i-Yamaha YAS-109 ayizukuza ne-subwoofer eyahlukileyo engenazingcingo kuba ii-subwoofers zakhelwe kwi-bar yesandi.
Ibar yesandi enyanisweni ivelisa ilizwi elicacileyo lokucacisa incoko yencoko kwaye ukanti isenamandla okuphuma malunga ne-120W. I-Alexa eyakhelwe ngaphakathi ivumela ibar yesandi ukuba ilawulwe ngelizwi kwaye abasebenzisi banokunika ngokulula imiyalelo yesandi sokudlala umculo, ukumamela iindaba, ukuseta ii-alamu kunye namaxesha, ukubuza imibuzo, ukulawula izixhobo zasekhaya ezi-smart, kunye neminye imisebenzi eyenziwe ngezwi. .
I-Yamaha YAS-109 inenqaku elibonakalayo le-DTS elenza isandi esingqonge i-3D ebonakalayo. Ngokweefomathi zomsindo, ibar yesandi iyakwazi ukudlala iintlobo ezahlukeneyo zeefomathi zeaudiyo.Ngaphandle kwe-Alexa, ibar yesandi ngokwayo ine-App Bar Controller yayo evumela abasebenzisi ukuba balawule iindlela zesandi, umculo, kunye nokunye okuvela kwiapp yasimahla enokufakwa kwifowuni.
8. I-Bose Solo 5 Ibar yesandi yeTV
I-Bose Solo 5 ye-TV yesandi esinye sezona zixhobo zilula kolu luhlu ezinobunzima be-3.7 lbs kuphela. Ibha yesandi iza nolawulo olukude, intambo yamandla, kunye nentambo yeaudiyo yedijithali ebonakalayo.
I-Bose Solo 5 ye-TV yebar yesandi ngokuqinisekileyo ibar yesandi ejongeka ngathi ipholile, ngokulula kodwa yoyilo olumnyama kakhulu noludibeneyo. Umvelisi uzigcinile izinto ngokuthe ngqo kuba akukho zindlela zomsindo, iindlela ze-EQ, okanye useto onokukhetha kuzo.
Le bar yesandi yenzelwe ukuba ibe yiplagi kunye nokudlala, eyenza ukuba ibe yimpumelelo enkulu kuloo nto. Ibar yesandi enye ibonelela ngomgangatho ophezulu wesandi kunokuthembela kwisandi esiza ngokuthe ngqo kwizithethi zeTV.
Inkqubo yesandi ye-Solo 5 TV sisisombululo esilula, esinobuchwephesha obuphambili obuhambisa isandi esicacileyo i-TV yakho ayinakho, ngakumbi ngemowudi yencoko enokwenza onke amagama kunye neenkcukacha kwisandi zibalasele. Ixhotyiswe ngoqhagamshelo lweBluetooth ukusasaza ngaphandle umculo ngaphandle kwaso nasiphi na isixhobo esiphathwayo.
Bona ngakumbi malunga - Ezona Khamera zidijithali ziLungileyo ziphantsi kwe- $ 500
I-30 Roller Coaster Tattoo Uyilo lwaMadoda-Iingcinga zokuHamba ngeNdlela
Iingcamango ezingama-70 eziPhezulu eziPhezulu eziPhezulu eziPhezulu
Ilitye lokuBila likhupha amanqaku kunye neziBonelelo eziNcitshisiweyo ze-IPA
Ihempe ezili-10 zeHenley eziLungileyo zaMadoda ngo-2021
Iingcamango ezingama-61 ze-Barbed Wire Wire Tattoo - [2021 Isikhokelo sokuphefumlela]
Uyilo lweTatoo ezingama-60 zaMadoda-Iingcinga zeNdoda yeNdoda
Copyright ©2022 Onke Amalungelo Agciniwe | jfazinhaga.com |
Iphupha elibi ngaphambi kweengcinga zekrisimesi
ubuhle kunye nerhamncwa rose tattoos
izimvo ezijikeleze imali zegrabile ezijikelezayo
Iimpawu ezimnyama nezimhlophe zengalo
yeyiphi eyona ilotion yeetattoo
Iimpawu ezikhuthazayo kunye neentsingiselo zazo
Imagazini Yamaphephakazi Inikezelwe Kwindlela Yokuphila, Ingcebiso Yefashoni, Ingcebiso Yokuqina Kunye Nezikhokelo Zabathengi Zezona Zixhobo Zibalaseleyo.